Samsung Galaxy XCover FieldPro, famolavolana sy fiasa | Androidsis
Samsung Galaxy XCover FieldPro, finday avo lenta amin'ny tanety rehetra izay mahazaka azy rehetra!
Betsaka amintsika no nieritreritra fa, taorian'izany Samsung Galaxy Note 10 fandefasana, tsy nanolotra telefaona bebe kokoa ilay mpanamboatra Koreana. Eny, tsy misy zavatra lavitra amin'ny fahamarinana. Ary ny tena izy, ny orinasa monina any Seoul dia nanaitra anay tamin'ny smartphone vaovao izay manohitra ny fanoherana lehibe ny toe-javatra rehetra, ny Galaxy XCover Field Pro.
Eny, rehefa afaka taona vitsivitsy tao amin'ny seranan-tsambo maina, ny orinasa koreana dia miloka indray amin'ny telefaona amin'ny faritra rehetra izay misy fanoherana ny fikorontanana sy ny fahalavoana, ary koa ny toetra ara-teknika izay, na dia hafahafa aza amin'ity karazana terminal ity dia derao ao amin'ny faritra avo indrindra amin'ny indostria. Eny, ny tsatokazo vaovao henjana Samsung dia avo.
Fanamarinana miaramila sy fahombiazan'ny haavon'ny Samsung Galaxy XCover FieldPro vaovao
Araka ny hitanao amin'ireo sary samihafa miaraka amin'ity lahatsoratra ity, ny telefaona Samsung vaovao dia misy vatana vita amin'ny fingotra sy Kevlar. Amin'izany fomba izany, mahatohitra kokoa ny fikorontanana sy ny fianjerana. Amin'izany dia tsy maintsy ampiana ny fanamarinana azy ireo MIL-STD 810G, izay manome antoka fa tsy hisy fiatraikany amin'ilay fitaovana mihitsy ny fikapohana na ny fianjerany. Ho fanampin'ny fananana fanamarinana IP68 izay manome ny fanoherana ny Galaxy XCover FieldPro amin'ny vovoka sy rano.
Ary mitandrema, hahagaga anao ny toetrany ara-teknika. Eny, mahazatra an'ity karazana fitaovana ity ny manana efijery voafehy somary voafehy, ary ny Galaxy XCover FieldPro dia tsy ho afa-maina. Amin'izany fomba izany, ny vaovao finday samsung c henjanaIzy io dia manana tontonana 5.1-inch. Saingy, miaraka amin'ny vahaolana QHD! Eny, mahatratra ny fanapaha-kevitra 2.560 x 1.440 teboka, zavatra tena tsy fahita amin'ity karazana fitaovana ity.
Ampio ny mahery Exynos 9810 miaraka amin'ny RAM 4 GB ary tahiry 64 GB. Tena marina, io no fampitahana mitovy amin'ny an'ny Samsung Galax7 S9. Amin'izany no ahafahantsika milamina tsara, satria afaka mifindra izay lalao na fampiharana ianao tsy misy olana lehibe. Etsy ankilany, lazao fa manana fakan-tsary 12-megapixel aoriana misy tselatra LED telo heny izy, ho fanampin'ny sensor 8-megapixel eo aloha. Ary mitandrema, ny batterie 4.500 mAh dia mampanantena efijery iray andro tsy misy olana.
Tsy manana antsipiriany momba ny vidin'ny fandefasana na ny daty famoahana antsika eny an-tsena izahay, saingy mazava izany Galaxy XCover FieldPro avy amin'ny Samsung, tsy ho mora vidy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung Galaxy XCover FieldPro, finday avo lenta amin'ny tanety rehetra izay mahazaka azy rehetra!
Samsung dia mampiseho amin'ny hatsarana sy ny tombotsoan'ny One UI 2.0 miaraka amin'ny Android 10
Ny Xiaomi Mi Note 10 dia miloka ambony: bateria tsy mety ritra, efijery misy fahagagana sy maro hafa